Ogow wax badan oodan ogeyn !!! - Caasimada Online
Home Warar Ogow wax badan oodan ogeyn !!!
Ogow wax badan oodan ogeyn !!!
– Ogow Akhristow in xuruufta luqadda Engilish-ka lagu soo kobo odhaah ah “The quick brown is fox jumping over a lazy dog”.Halka luqadda Somaligana lagu soo kobo weedh uu sameeyay Cabdilaahi Suldaan Timacadde, weedhaas oo ah, “Sheekeena, wiilkiisa
Curad, gabadhuu qabi jirey, foox la’aan ma heesi karto”.
– Ogow Akhristow in xuruufta luqada Ingiliishka lagu soo kobo odhaah ah “The quick brown is fox jumping over a lazy dog”, halka luqada Soomaaligana laga soo kobo weedh uu sameeyay Cabdilaahi Suldaan Timacadde, weedhaas oo ah “Sheekeena, wiilkiisa Curad, gabadhuu qabi jirey, foox la’aan ma heesi karto”. Weedhss kooban sida la ii sheegay waxa sameeyay Alle Ha u naxariistee Abwaan Cabdilaahi Suldaan Timacadde.
– Ogow Akhristow in unuga ugu dheer unugyada jidhkeenu uu yahay unuga dareen wadka, unugaas oo farriin isaga maskaxda oo ku jirta madaxa illaa cidhbaha hoose ee jidhkeena.
– Ogow Akhristow in maqaarkeena ay ku jirto maado loo yaqaano Melanin, oo ay shaqadeedu tahay in ay inaga difaacdo fallaadhaha cadceeda, sidoo kalena masuul ka ah soo saarista midabka maqaarka jidhka, dawooyinka ay haweenku isticmaalaana waxa ay shaqada ka joojiyaan Melanintaas, sidaas darted dumarku marka ay dawadaas isticmaalaan jidhkoodu malaha awood uu midab ku yeesho, kulaylka cadceedana uu ugu adkaysto.
– Ogow Akhristow in ururkii koowaad ee Afrikaanka ah ee diyaarado lagu weeraraa uu ahaa ururkii xornimo doonka ee Daraawiishta, ee uu madaxda ka ahaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, jabhadan waxa uu Ingiriisku diyaarado ku weeraray 1920kii.
– Ogow Akhristow in saxaabigii koowaad ee waran dar ilaahay ugana ama u ridaa in uu ahaa Sacad Binu Waqaas.Sacad waxa kuu mid yahay 10kii saxaabi ee janada loogu bishaareeyay iyaga oo nool.
– Ogow Akhristow in idaacadii koowaad ee Afsoomaali ku hadasha ee hawada soo gashaa in ay ahayd Radio Hargeisa, oo markii koowaad la dhagaystay 1952.
– Ogow Akhristow in markii koowaad ee la tijaabiyo Nukliyeerka lagu dhuftay laba magaalo oo uu Jabaanku lahaa kuwaas oo la kala odhan jirey Hiroshiima iyo Nagasaaki, ganistaas nukliyeekuna ay Jabbaan ku khasabtay in uu is dhiibo, sidaadna uu ku afjarmay dagaalkii 2aad ee adduunku.
– Ogow Akhristow in figta Ifris, oo ah figta buureed ee adduunka ugu dheer loogu
magacdaray, ninkii koowaad ee ay u suutogashay in uu figtaas gaadho, isla markaana uu cabiro dhererka figta, ninkaasna la odhan jirey George Everest.
– Ogow Akhristow in aad maalintiiba indho la’dahay illaa 30 daqiiqadood !!!!, ha moodin
wax kale, 30kaas daqiiqadood waa ilbidhiqsiyada aad indhaha kolba isku qabanaysid.
– Ogow Akhristow in Sir Isac Newton uu yahay Saynisyahnkii daahfuray cufisjiidadka dhulka, Xisaabta kalkulaska, iyo waliba saddex xeer oo khuseeya socodka walxaha, xeerarkaas oo loo bixiyay xeerarka socodka walxaha ee Newton.
– Ogow Akhristow in Cismaan Binu Cafaan lagu naanaysi jirey “Du nuureyn”, ama kii labada nuur lahaa, waxaana taas loogu bixiyay waxa uu nasiib u helay in uu guursado laba hablood oo uu Nabi Maxamed SCW, uu dhalay.
– Ogow Akhristow in uu Macaad binu Jabal ahaa Saxaabigii, u cilmi badnaa asxaabta rasuulka mark laga hadlayo xalaasha iyo xaaraanta ama culuumta fiqhiga, sidaas na waxa cadeeyay Nabi Maxamed SCW.
– Ogow Akhristow in uu ilmada indhaheena ku jiro Enzyme loo yaqaano Lysozyme kaas oo ilaaliya indhaha, baabiiyana xayawaanada ili ma aragtayga ah ee indhaha gala,
xayawaanadaas oo ay ka mid yihiin bakteeriyada iyo fayrasku.
– Ogow Akhristow in ururka Qaramada Midoobay lagu dhisay magaalada Sanfransisco oo ku taalla Maraykanka, sanadkii 1945.